Sheekh Shariif iyo Khayre oo ku kulmay Nairobi | KEYDMEDIA ONLINE
Sheekh Shariif iyo Khayre oo ku kulmay Nairobi
Sheekh Shariif ayaa labadii bilood ee lasoo dhaafay ku maqnaa dalka Imaaraadka, isagoo halkaasi u tagey arrimo la xiriira dhaqaale u raadinta ololahiisa doorashadda 2020-2021.
NAIROBI, Kenya - Nairobi ayaa noqotay halka laga hago siyaasadda Soomaaliya, iyadoo ay saldhig ka dhigteen Musharaxiin badan oo halkaasi kawada olole doorasho, xulufo raadin iyo kulamo ay la qaadanayaan diblomaasiyiinta beesha caalamka.
Xasan Cali Khayre ayaa la kulmay Madaxweynihii hore dalka Sheekh Shariif, waxaana kulan u ahaa mid labada mas'uul ay ku gorfeeyeen arrimaha doorashooyinka iyo sidii u dhex-mari lahaa iskaashi, maadaama ay la tartamayaan Farmaajo, oo dhaqaalaha dawladda ku galaya doorashadda.
Midna kama uusan hadlin waxa kulanka Nairobi uu ku saabsanaa, balse ilo ku dhaw ayaa Keydmedia Online u sheegay in Khayre uu raadinayo xulufo siyaasadeed iyo saaxiib garab istaagga, maadaama mudadii uu Ra'iisul Wasaaraha ahaa sameystay cadow badan.
Kenya maadaama uu khilaaf kala dhaxeeya Maamulka Farmaajo, waxay dalkeeda u furtay siyaasiyiinta Soomaaliyeed, oo Muqdisho aan suurtagal ahayn xiligan inay ku qabtaan kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah dawladda waqtiga kasii dhamaanayo.
0 Comments Topics: farmaajo kenya khayre sheekh shariif
Afartii sano ee xukunka Farmaajo, waxaa si isdaba loogu xad-gudbay xeerarka warbaahinta iyo xoriyadda hadalka, iyadoo la isku dayay in la aamusiyo saxaafadda madaxa banaan ee Soomaaliya, tani waa Warbixinta tifaftiraha Keydmedia Online ee Muqdisho.